Daawo Sawirada: Ciyaartii ugu horeysay oo 30-sano kadib Xili Habeen ah lagu Ciyaaray Konis iyo Waabari oo koobka qaaday - Saafi Films Production Somali Films Hindi Af Soomaali Musalsal heeso
Latest news updatePrimary - Xulka
Daawo Sawirada: Ciyaartii ugu horeysay oo 30-sano kadib Xili Habeen ah lagu Ciyaaray Konis iyo Waabari oo koobka qaaday
First time after 30 years of war torn Mogadishu is held overnight football match.
Waxaa caawa garoonka kubada cagta Koonis ee magaalada Muqdisho ka dhacday ciyaar aad u xiiso badan oo Fiinal aheed, ciyaartan ayaana aheyd midii ugu horeesay oo mudo 30-sano kadib lagu ciyaaro Garoonka Koonis si toos ahna loo daawado.
Ciyaarta Fiinalka oo katirsaneed koobka Degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa wada ciyaarayay Degmooyinka Hodan iyo Waabari, waxaana ugu dambeyn koobkii loo tartmayay ku guuleesatay Degmada Waabari.
Ciyaartowdii mataleysay Degmada Waabari ee gobolka Banaadir ayaa kaga guuleestay dhigooda Hodan 3-gool iyo 1, waxaana Waabari koobka qaaday kadib guul daro ay la kulantay labadii Fiinal ee ugu dambeeyay ee tartrankan ciyaartay.
Waxaa garoonka Kubada Cagta Koonis caawa ciyaarta u daawasho tagay kumanaan qof oo si weyn ciyaaraha u xiiseeya gaar ahaan taageerayaasha labada degmo ee caawa wada ciyaarayay fiinalka koobka Degmooyinka gobolka Banaadir.
Ciyaartan ayaa sidoo kale si toos ah looga daawanayay daafaha Dunida iyadoo ay tabinayeen telefishinada dalka, waxaana caawa dad badan daawadeen muuqaal muujinaya in magaalada Muqdisho nabad tahay uuna ka jiro hurumar baaxad weyn.
Udugii Jaceylka 47
WARKA 08 09 2018 Shirkii maamul goboleedyada Kismaayo ka socday oo lagu go aansaday in…
Appointee will be board’s first Somali American